Thursday April 23, 2015 - 01:11:16 in Maqaallo by Super Admin
Hay'ada action aid oo ah hay'ad samafal kana shaqaysa in ka badan 45 dal oo ay ka mid tahay somaliland, kana shaqaysa mashaariico faro-badan oo ay kamid yihiin Xuquuqda ddumarka,waxbarashada,cuntooyinka,dimuquradiyada,heshiisiinta dadka is
Iyadoo hay’adu ay qabato mashaariico kana fulisay labada gobal ee maroodi jeex iyo gabiley ayaa waxaa dhawaan degmada allaybaday ka dhacday arin ugub ku ah Somaliland .
Arintaas oo ah in ay hay’adu ay madaxa ay isku galisay ururkii haweenka ee ka dhisnaa allaybaday oo ay ku dhex abuurtay khilaaf xoogan oo markii loo maaro waayay gaadhay masuuliyiinta gobalka gabiley si ay u xaliyaan.
Haddaba hay’ada action aid ayaa degmada allaybaday ka fulisa mashruuc lacag bixin dayn ah oo muddo lagu soo celiyo, waxayna hay’adu lacag bixinta waday mudo ku siman shan sano, waxaana hay’ada lacagta uga masuul ah urur haween oo ka jira allaybaday oo si siman ugu qaybin jiray haweenka .
Iyadoo ay sidaa tahay ayaa haweenay ka tirsan hay’ada action aid uguna qaabilsan mashruucan lacag bixinta iyo tabarada oo maagaceeda la yidhaahdo saynab maxamed xasan ay khilaaf iyo fidno ku dhex abuurtay hogaankii ururka haweenka allaybaday.
khadra c/lahi aden iyo asli sheikh ayaa ahaa labada masuul ee hogaanka ururka oo muddo wada shaqaynayay oo ay ka dhaxaysay walaaltimo iyo shaqo wanaag.
Iyadoo ay sidaa tahay ayaa gabadha matalaysay hay’ada action aid ee saynab maxamed ay damacday in hogaanka ururka ay ka dhex shido khilaaf iyo muran, waxayna samaysay in ay la safato mid ka mid ah labada dumarka ah ee hogaaminayay ururkaa.
Saynab waxay samaysay shirqool qarsoon oo ah in ay meesha ka saarto oo sifo sharci daro ah u badasho gudoomiyihii ururka khadra c/lahi aden waxayna si hoose u soo xulatay haween ay dano gaar ah ka damacsanayd waxayna ururkii haweenka u kala jabisay labo garab.
Waxay mudo laba wiig ah kala badashay oo ay magacawday 3 gudoomiye, 3 kuxigeen iyo 3 xoghaye oo aakhirkii keentay in ay haweenkii allaybaday ay ku dhex abuurtay khilaaf hor leh oo aanay degmada waligeed soo marin.
Ururka haweenka ayaa waxaa u yaalay xeer ah in marka cid xil loo dhiibayo ama laga badalayo in shir weyne la isku yimaado oo oo cida la doonayo loo igmado masuuliyada, laakiin sidaasi may dhicin ee waxaa makhsin hoostii ay kusoo dooratay gabadha matalaysay hay’ada iyo koox ay iyadu hoosta ku wadatay.
Khilaafkan haweenka ayaa soo noqnoqday muddo waxaana u maaro waayay maamulka allayabday waxaaa markii danbe soo faro galiyay maamulka heer gobal, waxaana axadii aynu soo dhaafnay19/4/2015 degmada allaybaday soo gaadhay oo u yimid siday u damin laahaayeen khilaafkan ka dhaxeeyay labada garab ee ururka haweenka badhaasaabka gobalka gabiley mustafe cabdi shine, badhasaab ku xigeenka cali case, mayar ku xigeenka cabdi iid, xildhibaan burale mawlid jiir iyo taliyaha qaybta gabiley waxayna dhamaantood goobtii lagu kulmay ka sheegeen in haweenka allaybaday ay sameeyaan midnimo iyo tanaasul, waxaana gacanta la isku saaray hogaankii ururka.
Iyadoo arinka la isku afgartay heshiis iyo maslaxo la sameeyo ayaa waxaa goobta ka tanaasulay hogaankii ururka si loo doorto hogaan cusub oo ku dhisan cadaalad,ayaa hadana waxaa khilaafkii dib u horisay gabadhii hay’ada ka socotay ee saynab maxamed xasan waxayna jeebka kala soo baxday liis dumar ah oo ay soo xulatay oo ay leedahay waa hogaanka ururka haweenka. Dumarkaa ay u magacawday hogaanka ayaa loo arkay in uu ahaa mid dhan ka rarnaa oo aanay ka dhex muuqan labadii garab ee uu ka dhaxeeyay khilaafku, waxaana aakhirkii goobta ka dareeray garabkii lagu tacadiyay iyagoo goobtan ay fadhiyaan maamulka heer degmo iyo heer gobalba, waxaana khilaafkii u maaro waayay maamulkii gabiley waxayna daminta arintaa ay khasabtay in habeenkii isniinta soo galaysay ay u dhaxaan,nasiib daro waxay aroortii allaybaday ka hayaameen iyagoon xalin khilaafkii la dhex dhigay ururkii haweenka.
Haweenka allaybaday ayaa waxay soo saareen baaq ay ku socodsiinayaa maamulka sare ee hay’ada action aid:-
Anagoo ah haween weynaha degmada allaybaday waxaany hay’ada Action aid u haynaa ixtiraam iyo sharaf badan, hay’ady waa mid samofal oo wax badan noo tartay oo nala shaqaysay laakiin baruur ayaa baruuryo qudhmisa ayaanu leenahay.
In hay’ada action aid ka guurto allaybday ama in ay badahso gabadha ugu qaabilsan tababarad iyo dayn bixinta ee la yidhaahdo saynab maxamed xasan.
Waxaanu hay’ada ka codsanaynaa In ay saynaba ay faraha kala baxdo ururka haweenka ee degmada allaybaday.
Inta gabadha saynab ay tunka ku sidato gabadha la yidhaa asli sheikh ayna nabadi ka ansaxayn ururka dhexdiisa.
in ay saynaba kaw ka tahay iska horkeenka haweenka oo muddo laba wiig ah ay badashay gudidii aanu dooranay.
Saynab waxay doonaysaa in bulshada iyo haweenka allaybaday ay madaxa isku galiso.
Mudacyada ay gabdhaa saynab ay iskugu dhiibtay haweenka iyadaa ka masuul ah wixii ka dhaca.
Waxaa jirta in boob uu ku socdo dayntii wareegaysay ay biixnaysay hay’adu
Gabo gabadii waxaanu cod dheer ku sheegaynaa in la naga qabto gadhadha hay’ada u qaabilsan tababarada iyo dayn bixinta saynab.
Magacyada Hogaankii ururk haweenka ee la doortay.
1. Xamda xasan maxamed
2. Yasmiin cali baqari
3. Suleekha daahir xasan
4. Nimco maxamed Ibrahim
5. Gudoon axmed daauud
6. Hinda abdi bakaal
W/Q: Kamal Sh Ismail Aden